Beesha Caalamka oo war kasoo saartay dhaarinta Xildhibaanada Cusub | dayniiile.com
Home WARKII Beesha Caalamka oo war kasoo saartay dhaarinta Xildhibaanada Cusub
Beesha Caalamka oo war kasoo saartay dhaarinta Xildhibaanada Cusub
Saaxiibada caalamka ayaa soo dhaweynayay dhaarinta maanta ee xubnaha dhowaan la doortay ee Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ee Soomaaliya. Kaddib muddo ka badan hal sano oo dhammaan hay’adaha Soomaaliyeed ee la soo doortay ay dhaafeen waqtigoodii dastuuriga ahaa.
War Saxaafadeed kasoo baxay ayaa lagu yiri “waxaan ku faraxsanahay in baarlamaanka cusub uu hadda diyaar yahay”
Waxaan si adag u cambaareyneyeen wakiilada beesha Caalamka weerarka hoobiyaasha ah, ee ay mas’uuliyadiisa sheegteen al-Shabaab, oo subaxnimadii hore ee maanta ka dhacay meel ku dhow goobta ay ka dhaceysay xafladda dhaarinta.
“Waxaan ku hanweynahay in si degdeg ah loo dhamaystiro marxaladaha haray ee geedi-socodka doorashada, gaar ahaan doorashada hoggaanka baarlamaanka, kadibna Madaxweynaha. Waxaan ogsoonahay in ay jiraan kuraas baarlamaan oo aan la buuxin, waxaana fahamsanahay in, marka kuwan la go’aamiyo, in xubnaha dheeraadka ah la dhaarin karo oo ay ku soo biiri karaan geeddi-socodka hadba meeshi uu marayo” ayaa mar kale lagu yiri warka kasoo baxay beesha Caalamka.
Saaxiibbadu waxay mar kale ugu baaqeen madaxda Soomaalida inay yareeyaan xiisadaha siyaasadeed, ixtiraamaan xuquuqda aadanaha iyo xorriyaadka muwaadiniinta Soomaaliyeed, ayna si deg deg ah, nabad oo lagu kalsoonaan karo u soo gebagebeeyaan hannaanka doorashada.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo soo dhaweeyey Xildhibaanada cusub ee maanta la dhaariyey
Next articleMADAXWEYNE FARMAAJO OO U HAMBALYEEYEY XILDHIBAANNADA LABADA AQAL EE BAARLAMAANKA FEDERAALKA SOOMAALIYA
Beesha Caalamka oo war culus ka soo saartay Doorashada maanta ee...